android ဖုန်းများအတွက်စစ်မှန်သောဘက်ထရီချွေတာ APK ကို | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » စစ်မှန်သောဘက်ထရီ Saver
စစ်မှန်သောဘက်ထရီချွေတာ APK ကို
ဒါကြောင့်ကြာကြာကြာရှည်အောင်သင့်ရဲ့ဘက်ထရီသီးဖျော်ရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်ပါလိမ့်မယ်သင့် android device ကိုများအတွက်တစ်ဦးကအစွမ်းထက် app ကို။
စစ်မှန်သောဘက်ထရီချွေတာ သင့်ရဲ့ wifi နှင့်မိုဘိုင်းဒေတာဆက်သွယ်မှု (2g, 3g, 4g, LTE ကို) အသုံးပြုမှု analizing သူတို့ကိုကိုင်တွယ်သူတို့လိုတာထက်ပိုပြီးအရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြု. မှသူတို့ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းဖြင့်ဘက်ထရီကိုကယ်တင်တော်မူ၏။ ဒါဟာအစသင်သည်သင်၏မျက်နှာပြင်အလားအလာနက်ရှိုင်းသောအိပ်စက်ခြင်းမုဒ်, သင်တို့သည်တန်ခိုးကိုအသုံးပြုမှုအများဆုံး optimization သေချာသည်ဤလမ်းမှသင့်ရဲ့ device နိုးထစေခြင်းငှါနောက်ခံဖြစ်စဉ်များရပ်ဆိုင်းနိုင်ရန်အတွက်ချွတ်အခါအလိုအလျှောက်သင့်ရဲ့မှတ်ဉာဏ်ကို clean ဖို့ option ကိုပေးသည်။
★ဘက်ထရီအဆင့် (ရာခိုင်နှုန်း) သတိပေးချက်ဘားပေါ်တွင်သင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့တိကျစွာသင်၏ကျန်နေသောအသီးဖျော်ရည်များနှင့်ပိုပြီးအချက်အလက်သိနိုငျဒါ။
အစစ်အမှန်အချိန်အတွက်ဘက်ထရီအဆင့်, အပူချိန်, ဗို့အားနှင့်ပိုပြီးစောင့်ကြည့်ဖို့★ပင်မမျက်နှာပြင်ဝစ်ဂျက်!
★ Root access ကိုလိုအပ်သည်မဟုတ်ပါ!
★ App ကိုကြော်ငြာ-ထောက်ခံသော်လည်းသင်လျင်မြန်စွာအခမဲ့အားလုံးကိုကြော်ငြာတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်!
- v1.7 ကို Maintenance update ကို
- v1.5 Added မှတ်ဉာဏ်သန့်ရှင်းရေးခြွင်းချက်
- v1.4 အစီရင်ခံအင်အားအပိတ်များ fixed
- v1.3 ငါတို့သည်အချို့သောပြုပြင်မှုများလုပ်များနှင့်ဘက်ထရီအပြည့်အဝဖြစ်ပါတယ်အခါအကြောင်းကြားစာနှိုးဆော်သံသောကျယ်ပြန့်မေတ္တာရပ်ခံ feature ကိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့်ဖွင့်ပေးထားပေမယ့်သင်ချင်သောအပြင်အဆင်များအပိုင်းအချိန်မရွေးအတွက် disable နိုင်ပါတယ်။
- တိုးတက်လာသော UI ကို
- အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည်အချို့ bug တွေ Fixed ။ ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရာကြောင်းလူတိုင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
2.54 ကို MB
AX ဘက်ထရီ Saver
ဘက်ထရီ Saver Pro ကို ...
Fast Booster: မက်စ်
Kaspersky ဘက်ထရီ ...